Incwadi ene-Emojis ▷➡️ eltecnoanalista
Incwadi ene-Emojis. Uma ufuna ukudlulisa a imizwa kumlayezo nge-smartphone noma ezingxoxweni ezingokoqobo ezinkundleni zokuxhumana, kungenzeka ukuthi usuyisebenzisile kakade inhliziyo yakho, "isithupha phezulu" isandla, izintende, noma ubuso obuphuzi obujabulisayo. Ukusesha kwe-Google kwakamuva kuthole ukuthi igama elithayiphiwe kakhulu ku-SMS noma ingxoxo bekungelona igama, kodwa idizayini yenhliziyo ebomvu. Ngokusho kwenkampani, isithombe nokuguqulwa kwaso kuvela izikhathi eziyizigidigidi ngosuku emhlabeni jikelele. Ukudla, izilwane, ezokuthutha, abantu, imizwa. Zonke lezi zithombe ezimibalabala ezivela njengenye indlela kukhibhodi yakho zibizwa I-Emojis.
Incwadi ene-Emojis ➡️
Ukuxhumana akukhona nje ngamagama akhulunywayo noma abhaliwe, ngoba sibuye sixhumane ngaphandle kokukhuluma, okungukuthi, ngaphandle kokusebenzisa ulimi. Ngokunembayo, ngesimo sobuso bethu, ukuthinta komzimba wethu, ulimi lwethu lomzimba kanye nephimbo. Ukuxhumana kwethu kuya ngokuya kudijithali. Sibhala ama-imeyili futhi sixoxe WhatsApp, Fb, Instagram noma Snapchat. Esingakwazi ukukuveza empilweni yangempela ngamagama, noma ngokungakhulumi, kushintshaniswa ama-Emoji nemibhalo emifushane. Lokhu kwengeza imizwa embhalweni futhi kungavimbela ukungezwani. Abantu abaningi bathi bangakwazi veza imizwa kangcono nge-Emojis kunamagama.
Ngaphandle kwezinhlobonhlobo zobuso nokuthinta komzimba, kukhona nama-Emoji amele izinto. Lokhu kuvame ukusiza omunye ukuba aqonde isimo kanye nomongo waso. Ukuziphendukela kwemvelo kwe Incwadi ene-Emojis Lethe izinzuzo eziningi kumabhrendi kanye nezinkundla zokuxhumana. Enye yezinkulu izinzuzo zokusebenzisa Izithonjana kanye ne-Emoji ukufinyeza umlayezo, okungukuthi, ukwenza okuqukethwe yi-a umbhalo ukhuthele kakhulu futhi uqondile.
Singasho ukuthi cishe akunakwenzeka ukuthumela futhi ungayifaki i-Emoji, akunjalo? Uma ungomunye walabo abathandayo Incwadi ene-Emojis, kodwa awazi ukuthi zisetshenziswa kanjani ngobuchule, sizokusiza! Ibonisa ukuthi lezi izethulo eziyingcaca ezivele kanjani nokuthi iyiphi indlela engcono kakhulu yokuzisebenzisa ezincwadini zakho.
Incwadi enama-Emojis Ziyini?
Igama "I-Emoji » iphuma enhlanganweni ye-«and also» (絵), okusho isithombe ngesi-Japanese, kanye ne-"moji» (文字), okusho ukuthi uhlamvu. Okusho ukuthi, ziyizimpawu ezimele umqondo, igama noma umusho ophelele.
Kodwa ukunakekelwa! Ungaphambanisi Incwadi ene-Emojis con Izithombe-mzwelo / Izithonjana. Nakuba ama-Emoji eyizinhlamvu ezizimele, izithonjana ziyizithombe-mzwelo noma izimpawu ezenziwe ngezinhlamvu zekhibhodi, ezifana nokuthi (-: noma <3.
Umlando "wencwadi ene-Emojis"
I-Los Incwadi ene-Emojis Bavele bayingxenye yesiko lethu futhi nsuku zonke kunzima ukukhumbula ukuthi bavela nini futhi kuphi, akunjalo??
Kodwa indaba indala kakhulu kunokuba ibonakala futhi iqala ngo-XNUMX, ezweni laseJapane, njengoba imvelaphi yegama elithi "Emoji" isivele ifuna.
Konke kwaqala lapho inkampani yomakhalekhukhwini i-NTT DoCoMo ithuthukisa i-I-mode, uhlobo lwephakheji yolwazi lwamaselula, okuhlanganisa i-imeyili, isimo sezulu, izindaba kanye nokufinyelela ku-inthanethi, okwakuthuthuke kakhulu ngaleso sikhathi futhi kuhloswe ngayo ukuguqula indlela amaJapane ayexhumana ngayo. .
U-Shigetaka Kurita, omunye wabasebenzi be-NTT DoCoMo ababambe iqhaza kuphrojekthi ye-I-mode, wabona ukuthi ukuxhumana kwakubanda futhi ngezinye izikhathi kwakudukisa kanjani ngokukhawulela kuphela imishwana ebhalwe ngomakhalekhukhwini, futhi waqala ukubheka indlela yokwenza imilayezo ibe ngumuntu.
Ngokusho kuka-Kurita, ugqozi lwakhe lwalezi zimpawu zakuqala luvela emasikweni aseJapane kanye nezinkulumo azibona ku-anime ne-manga lapho esemncane.
Lapho umlobi we-Emojis ekugcineni ethula imiklamo yasekuqaleni ezinkampanini ezinkulu zobuchwepheshe, wayelindele ukuthi zithuthuke esakhiweni sazo, kodwa lokho akwenzekanga: izimpawu zangena kwimodi mina ncamashi ngendlela ezaziklanywe ngayo ekuqaleni.
Lokhu kugcine sekukhiqize izinhlamvu eziningi ezahlukene kanye nesiyaluyalu: inani lama-Emojis lifinyelele emakhulwini ayisishiyagalombili! - okwaqala ukuxazululwa ngo-XNUMX, lapho inkampani ngayinye yanquma ukubeka imephu ukuthi yiziphi izinhlamvu ezisetshenzisiwe futhi izame ukusungula izinga phakathi kwabo.
Ngo-2012, omunye wabaqhudelani be-NTT DoCoMo, ngosizo luka-Kurita, ekugcineni uhlele kabusha izinhlamvu zangempela.
Kulungile, kodwa “Ikhadi elinama-Emoji” liphume kanjani e-Japan futhi lathatha umhlaba?
Uma kubhekwa isifiso somphakathi obufisa ukuxhumana usebenzisa izimpawu zobungane nobuso, U-Apple ukhiphe i-Emojis yazo zonke izilimi ngo-2011, ngokwethulwa kwe-iOS.
Ukuze kugwenywe isiphithiphithi esasiyisiqalo se-Emojis e-Japan, i-Unicode Consortium yangena enkingeni yokumisa ikhodi yomlingiswa ukuze abasebenzisi bezinhlelo zokusebenza ezihlukene bakwazi ukusebenzisa i-Emojis ngaphandle kokungahambisani.
Njengamanje, i Incwadi ene-Emojis ziyingxenye yesiko, futhi zisetshenziswa kusukela ekuxhumaneni kwansuku zonke kuye ekuxoxeni izindaba, njengasendabeni yencwadi ethi Emoji Dick, eyalolonga indaba evamile ka-Moby Dick kusetshenziswa ama-Emojis kuphela.
Incwadi enama-Emojis Kwezokumaketha
Ngokuthandwa okukhulu kwe Incwadi ene-Emojis kanye nendlela abethulwa ngayo ngesiko leplanethi, abathengisi abahle babone amathuba angenakubalwa lolu limi olungawanikeza ukuxhumana namakhasimende abo.
Lesi yisinyathelo esibalulekile ngaphambi kokucabanga nganoma yikuphi ukuxhumana, njengoba sihlala futhi kuzo zonke izimo sikhuluma lapha kubhulogi.
Ngaphambi kokuthi ucabange ngalokho okufanele ukusho nokuthi ungakusho kanjani, thola ukuthi umuntu wakho uyasebenzisana yini ne ukusetshenziswa kwe-Emojis. Ingabe izethameli zakho zikumaphesenti angu-8 angakasebenzisi futhi azifani nabalingiswa?
Kungenzeka ukuthi ubonile, kodwa Incwadi ene-Emojis zivuselelwa njalo.
Futhi khumbula ukuthi umuntu wakho ubelokhu ekusebenzisa ini, ukuthi iziphi izinto ezithandwayo, nokuthi yini engasasetshenziswa, kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi ukuxhumana kwakho kushunwe ngolimi lokuthi ufuna ukufinyelela bani.
Ngakho-ke, kuyindlela enhle yokusebenzisa Incwadi ene-Emojis en hlanganyela ngesikhathi sangempela futhi uhlanganyele nezithameli zakho, ikakhulukazi uma lokho kuxhumana kungahlelekile kakhulu futhi kujabulisa, njengalapho othile encoma inkampani yakho noma okuqukethwe kwewebhusayithi yakho noma inethiwekhi yokuxhumana nabantu.
6. Yazi ukuthi uzosebenzisa nini
I-Emoji esetshenziswe esimweni esibucayi ngempela, njengalapho uphendula umbhikisho weklayenti lakho ku-Twitter noma esitatimendeni esibucayi kakhulu, ingadutshulwa onyaweni.
7. Sebenzisa Incwadi ene-Emojis ehambisana nomlayezo wakho
Ungalokothi usebenzise Incwadi ene-Emojis ukusebenzisa nje. Qiniseka ukuthi umsebenzi uzokwengeza emyalezweni wakho noma uhlobane nalokho ofuna ukukusho.
Lobu buso obujabulile obubonisa amazinyo abo buyi-Emoji ephelele ukuchaza injabulo noma injabulo yomlayezo owamukelwe. Lesi sithonjana esidumile besilokhu sinathi kusukela ekuqaleni kwezinhlelo zokusebenza ze-imeyili ezisheshayo nezinkundla.
I-Emoji Ehlekayo Ekhalayo isetshenziselwa ukuzwakalisa ukuthi uhleke kakhulu kangangokuthi amehlo akho agcwala izinyembezi. Kusetshenziswa ukuxhumana lapho umuntu ethola okuthile okujabulisa ngempela. Le Emoji yaziwa kakhulu kangangoba bekungeyokuqala ukwengezwa kusichazamazwi sesiNgisi i-Oxford kwathi ngo-XNUMX yathathwa “njengeZwi Lonyaka”.
Le Emoji isetshenziswa ngesikhathi lapho umuntu efisa ukuveza ubumsulwa bakhe. Libuye lisetshenziswe lapho othile enza izenzo ezinhle, emnandi kakhulu, engenacala noma eziphatha ngendlela eyisibonelo.
Ungangithathi serious! Le Emoji isetshenziselwa ukukhomba umlayezo olahlekisayo, oyindida noma ohlekisayo. Ngaphezu kwalokhu, kungamela ukuthi uthola okuthile okuyisicefe noma ungathandi ihlaya.
Lobu buso obunonya obucwayizayo bungabonakalisa isenzo sokusebenzisana noma imvume, futhi busetshenziswa njengophawu lokudlala ngothando. Ngokunjalo, ingasetshenziswa ukuveza ukuthi "KULUNGILE" okunikezwa ngumuntu, amahlaya noma indida njengoba kungaba njalo.
Lobu buso obujabulile obunamehlo amise okwenhliziyo bukhombisa ukuthi umuntu uyahlanya othandweni futhi angaba okomuntu, indawo, noma into. Kuyi-Emoji enhle ukuthumela ku-crush yakho.
Lena enye yama-Emojis okuqabula asetshenziswa kakhulu, ezwakalisa ukwazisa, ukubonga noma inhloso ethile yothando. Ingasetshenziswa futhi ekugcineni komusho obhuqayo noma njengokusabela esigijimini esingenanhlonipho.
Le Emoji idume kakhulu futhi ivamise ukusetshenziselwa ukuthumela ukwanga okunothando komunye umuntu. Kunama-Emojis ahlukene aqabulayo, kodwa lena ingenye esetshenziswa kakhulu.
Ama-kegs amakhulu, ukumamatheka okungajabulisi, namazinyo angaphandle, le Emoji iyisimo esingokwengqondo somuntu ohlakaniphile. Isetshenziswa ngendlela ehlekisayo noma ebhuqayo, ukuveza ukuthi uhlakaniphe kangakanani.
Uma ufuna ukukhombisa ubuhlakani, lena i-Emoji efanelekile. Ingase futhi isetshenziselwe ukukhombisa indida nokunganaki kokuthile okukhulunywe ngakho. Ngaphezu kwalokho, lifanekisela ilanga, amaholide kanye nehlobo ogwini.
Lokho kumomotheka okuyingxenye kumelela ukubhuqa, ukubanda noma kusho ukuthi kukhona owenza okuthile. Ingase futhi isetshenziselwe ukudlala ngothando noma ukwenza izenzo zocansi.
Le Emoji isetshenziselwa ukusho ukuthi umuntu udabuke kakhulu futhi ukhungathekile. Imele ukudabuka, ukuzisola nokuzisola.
Le Emoji isetshenziswa uma uphatheke kabi, uthukuthele, noma uthukuthele kakhulu ngokuthile. I-Emoji Yobuso Obuthukuthele iveza isimo esibi noma ukungakhululeki esimweni.
Lobu buso bumele umuntu owethukile futhi omangele. Kufana nokushaqeka ngokujulile nokumangazwa isenzakalo esibi noma isenzakalo esishubile.
Le Emoji isetshenziselwa ukumelela ukuthi umuntu akakwazi ukukhuluma. Ukuthi othile akafuni noma akakwazi ukusho lutho ngesihloko esithile. Isetshenziswa ezingxoxweni ezinzima, eziphoxayo noma ezimbi.
Le Emoji ibonisa ubuso obungabonisi nokubukeka okumaphakathi. Kusho ukuthi umuntu akanandaba nesimo. Ngokuvamile lisetshenziswa lapho okuthile kungenasithakazelo futhi ingekho inkulumo ekahle yokudlulisela lowo muzwa.
Hewu Nkosi yami! Lobu buso obumangele ngendlela engathandeki busetshenziswa lapho kwenzeka okuthile okushaqisayo. Kungaba ukusabela ekuziphatheni okubi noma umlayezo odelelayo, noma lapho kungekho okungenezelwa kulokho osekushiwo.
Isetshenziswa njengesisho sokuthi ingxoxo igcwele intukuthelo futhi iyozela.
Le Emoji isho ukuthi lo muntu ubethukuthele kakhulu ngalokho obekushiwo kangangokuthi angabuya ngokoqobo. Isetshenziswa njengendlela yokungavumeli okuthile.
Haleluya! Lezi zandla ezilulelwe phezulu zisetshenziselwa ukugubha okuthile noma ukuveza ukuthi umuntu ujabule ngoba into abeyilindele ekugcineni yenzeka. Uphinde athi uyazijabulisa futhi uyasithokozela lesi sikhathi.
Wenze kahle, kuhle kakhulu! Le Emoji ibonisa izandla ezimbili ezishaya izandla futhi isetshenziselwa kakhulu ukuzwakalisa imvume nokubonga. Ingasetshenziswa futhi ngokubhuqa, uma kukhona okungakufanelanga ukushayelwa ihlombe!
Lesi sibhakela sisetshenziselwa ukukhuthaza othile noma ukusho ukuthi uvumelana nomuntu osohlangothini lwakhe. I-Fist Emoji ingenye edume kakhulu, esetshenziswa ngokunembile njengesenzo esifanayo esidumile sobungani empilweni yangempela, okungukuthi, ukubingelela umngane esikhundleni sokuthi "sawubona". Ngakolunye uhlangothi, kungabuye kuhunyushwe njengosongo lokushaywa.
Ngikubhekile! Lawa mehlo ama-2 asho ukuthi kukhona okubonwayo noma okuqinisekiswayo.
Le Emoji ichaza ukuthinta okuye kwaduma ngochungechunge lwe-Star Trek. Kusho ukuthi "akukwazi ukuba yiqiniso!"
Isetshenziswa uma uzwa noma ubona othile enza into ewubuphukuphuku, kodwa ingasetshenziswa futhi uma uzizwa "unamahloni ngabanye."
I-Peach Emojis isetshenziswe kabanzi ukuze imele izinqe, ngenxa yokufana okubonwa ngabasebenzisi abaningi. Lokhu kuholele ekutheni aziwe ngele- "maxed out emoticon."
Inyanga egcwele i-euphemism yasekuqaleni esetshenziselwa isinqe. Eqinisweni, e-United States, inyanga ibisetshenziswa ukuchaza izimbongolo kusukela ngo-XNUMX, kudala ngaphambi kokuba kusungulwe i-Peach Emoji.
Le Emoji ye-Smiling Poop isetshenziswa kuzimo ezahlukahlukene. Ukusetshenziswa okuvamile kwalokhu ukuthi okuqukethwe kubi, kodwa kungase futhi kusetshenziselwe ukuveza ulaka lokwenziwa, ngenxa yobuso obujabule, obumamathekayo bale nqwaba yendle.
Le Emoji ivame ukusetshenziswa ukufundisa othile njengokungathi uyathandaza, ecela okuthile kuNkulunkulu. Nokho, empeleni lokho elikumelelayo "okuphezulu 5".
Ngingasiza kanjani? Le Emoji ikhombisa owesifazane okufanele aqondise ikhasimende futhi aphendule imibuzo yabo. Nokho, ngokuvamile kuye kwaba uhlobo lokubhuqa noma isibindi.
Incazelo Yesilayezi Emojis
Okushiwo i-WhatsApp Emojis entsha
Izincazelo ze-WhatsApp Emojis